Virtual Gozo Hal Marathon na Mediterranean Archipelago nke Malta?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » Virtual Gozo Hal Marathon na Mediterranean Archipelago nke Malta?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Gozo mebere ọkara Marathon
Nwanne nwanyi mara mma nke Malta nke Gozo bu otu n'ime agwaetiti Mediterenian mejuputara agwaetiti Maltese. Ndị otu Gozo Half Marathon gbakọtara oge wepụta oge iji debe mmanya na mpaghara ịgba ọsọ na maka mmemme nke afọ a, nke a ga-akagbu n'ihi ọgbaghara COVID-19.
Ugbu a, ndị otu Gozo Half Marathon 2020 kwupụtara na ọ ga-anabata nke mbụ Virtual Run, #RunGozo Virtual! Ndị sonyere nwere ike ịnweta ndị ọgba ọsọ ibe ha gburugburu ụwa, na-agbakọ n'otu oge na-agba ọsọ n'oge nsogbu a na oge ịma aka ndị a.
Ntuziaka maka #RunGozo Virtual:
Debanye aha na nke a Ọrụ njikọ (n'efu).
Gbaa, ebe ịnọ jụụ (ịnwere ike ịgbapụ n’èzí ma ọ bụ n’elu igwe ịgba ọsọ).
Dekọọ ọsọ gị site na iji ngwa a pụrụ ịdabere na ya (Strava, Fitbit, wdg).
Bulite ọsọ gị na nke a Ọrụ njikọ.
A na-agba ndị sonyere ume ka ha bulite ọsọ ha #RunGozo Community ịgba ndị enyi ume ka ha sonye ma merie!
Onye ọ bụla sonyere ga-enwe ohere iji nweta otu n'ime ihe nrite ndị a dị egwu:
Oge ezumike izu ụka site na Gozo Village Holidays.
Coros Pace multisports na-ekiri.
V 100 ndepụta ego si Teamsport Malta.
3 gafere maka 2021 Teamsport Gozo Half Marathon.
2 gafere maka 2021 Teamsport Gozo Half Marathon.
Biko rịba ama na a ga-ahọrọ ndị mmeri niile na aghara mgbe asọmpi ahụ mechiri na June 30th. A ga-ekwuputa ndị mmeri niile na sozo ọmalịcha Gozo Half.
Biko gbaa mbọ hụ na ị soro iwu ịchefu mmekọrịta mmadụ niile na ụkpụrụ nduzi gị niile.
Nọrọ ná nchebe! #RunGozo
Gbaa Virtual Gozo Hal Marathon Ugbu a na ezigbo onye na-esote afọ APRIL 24/25, 2021
Gozo Half Marathon amalitela uzo ohuru ohuru Marathon, nke abuo #RunGozo Expo, ndi Na-emeri Ọsọ Gị mkpọsa, na mgbanwe ndị ọzọ dị mkpa iji nyefee ahụmịhe kachasị na-agba ọsọ. A ga-emezigharị mgbanwe ndị a niile na mmemme nke afọ na - esote, nke ga - eme n’agbata Eprel 24 na 25, 2021.
Malta, agwaetiti dị na Oké Osimiri Mediterenian, mara ụbọchị 300 nke anwụ, afọ 7,000 nke akụkọ ntolite, ọ bụkwa ebe obibi maka oke nketa nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu (3) nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla -nọ n'ebe ọ bụla. Valletta, otu n'ime saịtị UNESCO, bụ ndị Knights dị mpako nke St John wuru ma bụrụ European Capital nke Omenala 2018. Ihe nna ochie nke Malta sitere na ntọala okike kacha ochie na-eguzo na ụwa, ruo otu nke Alaeze Ukwu Britain ọtụtụ usoro nchebe dị egwu, ma na-agụnye ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na owuwu ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Malta na agwaetiti nwanne ya bụ Gozo na Comino, na-enye ndị ọbịa ihe maka onye ọ bụla, osimiri mara mma, mmiri mmiri, ụgbọ mmiri, nri dị iche iche, ndụ abalị na-eme nke ọma, kalenda nke ememme na ihe omume kwa afọ, na ihe nkiri pụrụ iche setịpụrụ ọnọdụ maka ọtụtụ ụwa ama ihe nkiri na usoro TV. www.visitmalta.com